नेपालको कपिलबस्तु र नेपल्गंज्मा स्वाब संकलन र ट्रेसिङ तीव्रगतिमा ! – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २८ बैशाख २०७७, आईतवार ०८:३९
नेपालगन्ज, कपिलवस्तु — नेपालगन्जमा कोभिड–१९ संक्रमण समुदायमा फैलिएको एक सातापछि स्वाब संकलन र ट्रेसिङलाई तीव्र बनाइएको छ । तर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था बिजोग छ । स्वाब संकलनका लागि उनीहरूलाई ‘ग्लोब्स’ कै अभाव खट्किएको छ ।
पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा नेपालगन्ज–८ र ११ मा ट्रेसिङ गरिएका व्यक्तिको स्वाब संकलन गर्न शनिबार स्वास्थ्यकर्मीलाई धौधौ परेको थियो । गर्मीको प्रवाह नगरी काममा जुटेका उनीहरू स्वाब संकलनका लागि आउने सर्वसाधारण बढेपछि तनावमा थिए । प्रहरीका दुई स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूलाई सघाएका थिए । स्वाब संकलन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई लगाउनुपर्छ । त्यसमा हावा छिर्नु हुँदैन । गर्मीमा लामो समयसम्म पीपीई लगाउन मुस्किल हुने उनीहरूले बताए । ‘एउटा पीपीईले कति समय काम गर्ने, पीपीई लगाएर कति समय बस्ने भन्ने आफ्नै मपदण्ड छ,’ शनिबार एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘स्वाब संकलनका क्रममा कसैले खोके भने पनि हामी धेरै जोखिममा पर्न सक्छौं ।’
भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले एकपल्ट पीपीई लगाएपछि ६ देखि ८ घण्टासम्म काम गर्ने बताए । उक्त अवधिपछि स्वास्थ्यकर्मी खटिन सक्दैनन् । आराम चाहिन्छ तर नेपालगन्जमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएपछि स्वाब संकलनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई धपेडी भएको छ । ‘नेपालगन्जमा ल्याइएका पीपीई एकपटक लगाएर डिस्पोज गर्ने खालका छन्, लगाइसकेपछि डिस्पोज गर्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालगन्ज उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापामगरले स्वाब संकलन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग गरिरहेको बताइन् । स्वास्थ्य शाखाबाट ६ जनाको स्वास्थ्य टोली खटाएको उनले जानकारी दिइन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत अंगद शाहीले निर्देशिकाका आधारमा काम भइरहेको बताए । ट्रेसिङको दायराअनुसार एक जनाको १५ जनासँग सम्पर्क हुन सक्छ ।
‘पहिलो केसकाले सूचना दिए, अरूले सही सूचना दिएनन् । जसले गर्दा अनुसन्धान फितलो भयो । संक्रमितहरूको नजिक रहेका व्यक्तिले सूचना नदिएकै कारण ट्रेसिङ बहकियो,’ उनले भने । बॉकेमा १७ जना प्रयोगशालाकर्मी छन् । चार जना स्वाब संकलनमा जुटिरहेका छन् । बाँकी पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा काम गर्छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमण समुदायमा सरेपछि संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र स्वाब संकलनलाई तीव्रता दिइएको छ । संक्रमण देखिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८, त्यससँगै जोडिएको वडा–११ को टाँगा स्टेसन क्षेत्र र वडा–३ को जामा मस्जिद क्षेत्रका सर्वसाधारण स्वस्फूर्त परीक्षणका लागि स्वाब दिन पुगेका थिए । वडा–८ र ११ का स्थानीयका लागि नगर भवनमा स्वाब संकलन गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरिए पनि अन्य वडाका सर्वसाधारण कोरोना परीक्षण गराउन पुगेका हुन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार नगर भवनमा १ सय ६२ जनाले कोरोना जाँचका लागि नाम लेखाएका थिए । तीमध्ये कोरोनाको ‘हटस्पट’ का रूपमा देखिएको जोलहनपुर्वाका सर्वसाधारण छन् । उनीहरू संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका कारण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका थिए । उनीहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई सघाउन नेपाली सेनाका एक जना चिकित्सक काठमाडौंबाट नेपालगन्ज आएका छन् ।
वडा–३ जामा मस्जिद क्षेत्रका १ सय ८५ जनाको ट्रेसिङ गरिएको छ । आइतबारबाट उनीहरूको स्वाब संकलन गरिने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताए । त्यस क्षेत्रको कोरोना जाँच भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिनेछ । ‘शनिबार संकलन गरिएको स्वाब काठमाडौं पठाइएको छ, अब संकलन गर्ने स्वाब यही जाँच हुन्छ,’ उनले भने । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजंग शाहले कोरोना परीक्षणका लागि बढीभन्दा बढी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्वाब संकलन गरिने बताए । ‘परीक्षणको दायरा बढाएका छौं । खासगरी सबैभन्दा बढी प्रभावित वडासँग जोडिएका अन्य बस्तीमा पनि जाँच गर्छौं,’ उनले भने, ‘जति धेरैलाई परीक्षण गर्न सकियो, त्यति नै कोरोना नियन्त्रणलाई सहज पुग्छ ।’
सरकारले नेपाली सेनाको एयर ट्रकबाट नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालका लागि शुक्रबार दुई हजार पीसीआर किट र एक हजार भीटीएम पठाएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलन कार्यले तीव्रता पाएको हो । नेपालगन्ज–८, जोलहनपुर्वा एउटै टोलमा २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । शनिबार नगर भवनमा संकलित १ सय ६२ र भेरी अस्पतालमा संकलित ६ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइएको उनले बताए । बर्दियाको गुलरिया, राजापुर र मधुवन नगरपालिकाबाट संकलन गरिएको २ सय ३३ जनाको स्वाब पनि सेनाको हेलिकप्टरबाटै काठमाडौं पठाइएको राँझास्थित नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी नकुल थापाले बताए । कोरोना जाँचका लागि जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
साढे ६ सय स्वाब परीक्षण
नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा बाँकेका ६ सय ६२ जनाको पीसीआर जाँच गरिएको छ । तीमध्ये २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । समुदायमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमण अन्य क्षेत्रमा पनि हुन सक्ने भन्दै बिहीबार बाँकेका विभिन्न क्षेत्रमा संकलन गरिएको ५६ स्वाब परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । वैशाख २५ गते खजुरा गाउँपालिका–५ को उढरापुर, वडा–७ को सोनपुर, वडा–८ को रानीयापुर र वडा–४ का १७, खजुराका एक, नेपालगन्जको बीपी चोकका ३० र मेडिकल कलेज नेपालगन्जले संकलन गरेको आठ गरी ५६ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रात व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले भेरी अस्पताल नेपालगन्जको प्रयोगशालामा गरिएको जाँच नेगेटिभ आएको बताए । यसअघि बुधबार १ सय ८३ जनाको ट्रेसिङ गरिएकामा १ सय ३६ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो । त्यसको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ । गत शुक्रबार एक जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालगन्जमा संक्रमितको संख्या २४ पुगेको छ । उनीहरू नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ का हुन् ।
लुकेर आएका थप ३ जनामा कोरोना
सीमा क्षेत्रबाट लुकेर आएका कपिलवस्तुका थप तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंमा गरिएको स्वाब परीक्षणबाट एक १७ वर्षीय र दुई जना १८ वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पाइएको हो । उनीहरू मायादेवी गाउँपालिका–१, पकडीस्थित छत्रपाली तीर्थादेवी मावि क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
संक्रमितमध्ये दुई जना मायादेवी–२, अभिराव, मायादेवी–८, बिजुवाका हुन् । अर्का एक शुद्धोदन–६, कर्माका रहेको खुलेको छ । अभिरावका युवा वैशाख २३ गते राति क्वारेन्टाइनमा पुगेका थिए । बिजुवा र शुद्धोदनका युवा गत वैशाख २० गतेदेखि क्वारेन्टाइनमा थिए । यससँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या ५ पुगेको छ । गत बिहीबार उक्त क्वारेन्टाइनमा रहेका १६ वर्षे र २२ वर्षे युवामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यी दुवै मायादेवी–२, अभिरावका हुन् ।
संक्रमित दुई समूहमा मुम्बईबाट फर्केका हुन् । उनीहरू रोजगारीका लागि त्यहाँ गएका थिए । लकडाउनको बीचमा सिमानाबाट अवैध रूपमा छिरेर यहाँ आइपुगेका हुन् । उनीहरू चाकलचौडास्थित दशगजा आसपासबाट लुकेर आएको खुलेको छ ।
यहाँ संक्रमित देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट चिकित्सक यदुचन्द्र घिमिरे नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली जिल्ला आएको छ । उक्त टोलीले संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र ट्राभल हिस्ट्रीलगायत विषयमा अध्ययन सुरु गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए । टोलीले बिहीबार पुष्टि भएका तीन जना संक्रमितको घरमा पुगेर जानकारी लिएको छ । शनिबार उक्त क्वारेन्टाइनमा पुगेर ट्रेसिङको काम गरिरहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएका दुई युवाको समूहमा सात जना रहेको खुलेको छ । उनीहरू सीमा क्षेत्रसम्म सँगै आएका थिए । समूहबाट छुट्टिएर पाँच जना गाउँपालिकामा आएका थिए । ती पाँच जनामध्ये एक जनामा शनिबार र दुई जनामा बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएको हो । अन्य दुई जनाको अवस्था नखुलेको प्रहरी उपरीक्षक दीपशमशेर राणाले बताए । उनीहरू सीमा नजिकबाट छुट्टिएका थिए । उनीहरूको खोजी भइरहेको र शनिबारसम्म ठेगाना नखुलेको उनले बताए ।
भारतबाट लुकेर आएका व्यक्ति राखिएपछि उक्त क्वारेन्टाइनमा बसेका ६५ जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरेपछि पाँच जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र अन्यको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख महेन्द्र यादवले बताए ।
जिल्लास्तरीय कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समिति बैठकले उक्त क्वारेन्टाइन सिल गर्ने निर्णय गरेको छ । क्वारेन्टाइन आसपास सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । क्वारेन्टाइन तथा संक्रमितका परिवार बस्ने गाउँ भएर आवतजावत गर्ने पकडी–चाकलचौडा सडक खण्डमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य सवारीसाधन चल्न नदिने निर्णय गरेको उनले बताए । उक्त क्षेत्रमा लकडाउन अझ कडा बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ । संक्रमित सबैको बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार भइरहेको छ । उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
संक्रमण बढ्दै गएपछि शनिबार कपिलवस्तुका तीन स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा रहेका २ सय ८९ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । बुद्धभूमि नगरपालिकाका १ सय २५, कपिलवस्तु नगरपालिकाका १ सय २ र यशोधरा गाउँपालिकाका ६२ जनाको स्वाब संकलन गरिएको हो । सबैको स्वाब परीक्षणका लागि भैरहवाबाट शनिबार नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमार्फत काठमाडौं पठाइएको छ । सेनाको स्काई ट्रक शनिबार बिहान स्वाब संकलनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री लिएर आएको थियो ।प्रकाशित
नेपालगन्ज र कपिलवस्तुमा स्वाब संकलन र ट्रेसिङ तीव्र
: वैशाख २८, २०७७ ०८:२१
दिल्ली दूतावासले पठायो जानकारी-लिपुलेकमा सडक निर्माणका बारेमा।